Beegsigii Soomaalida ee South Africa oo wali sii socda | KEYDMEDIA ENGLISH
Beegsigii Soomaalida ee South Africa oo wali sii socda
Burcad hubeysan ayaa degaan hoos taga Magaalada Cape-town ee dalka Koofur-afrika ku dilay AUN, muwaadin Soomaaliyeed oo caan ka ahaa gudaha caasimadda waddanka dhaca Koofurta Afrika.
CAPE-TOWN, South Africa – Allaha u naxariistee Cadde Xasan Cadnaan oo ka mid ahaa ganacsatada Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Koofuf-afrika ayaa lagu dilay degaanka Philipi oo hoos taga magaalada uu xarunta ganacsi ku lahaa ee Cape-town.
Sida ay sheegeen qanacsato ku sugan caasimadda dalkaas, marxuumka ayaa u geeriyooday daawac xooggan oo ka soo gaaray rasaas ay qeybaha kore ee jirkiisa kala dhaceen koox burcad ah oo doonayay in ay dhacaan Rooti uu u waday Philipi.
Kooxdii dilka iyo dhaca geysatay ayaa ka baxsatay goobta falku ka dhacay, booliska Koonfur-afrika ayaana sidii caadada ahayd tilmaamay inay wadaan baaritaanno ay ku baadi goobayaan shaqsiyaadkii ka dambeeyay dilka.
Dilka ganacsadaahan Soomaaliyeed, ayaa la rumeysan yahay inuu salka ku haayo isir-sooc iyo boob, ka dhan ah ajaanibta Soomaalidu ugu horreyso ee ka xamaasha South Africa, kuwaas oo hubanti la’aan amni kula nool dalkaas.
Ku dhawaad 50 qof oo Muwaadiniin Soomaali ah ayaa la sheegay in dalkaas lagu dilay tan iyo bishii Jannaayo ee sannadkan.
Si kastaba Dowladda Soomaaliya ayaan sidii loo baahnaa uga hadlin gumaadka lagu hayo muwaadiniinta ku dhaqan South Africa.